အနာဂတ်စီမံကိန်း - ပရိုဂရမ်ကိုသင်ယူရန်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများ Androidsis
မည်ကဲ့သို့အစီအစဉ်ချရမည်ကိုသိခြင်းသည်သင်၏အလုပ်နှင့်မလုံလောက်သောအလုပ်အကိုင်တစ်ခုရရှိရန်သေချာစေသည်။ ဒုတိယဘဝစီမံကိန်းတစ်ခုအနေဖြင့်လည်း၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံစွာပြီးမြောက်သည် ပရိုဂရမ်လေ့လာရန်ခွင့်ပြုသည့် Android အက်ပလီကေးရှင်းများ ဘာသာစကားများစွာကို။
3 ကုဒ်: Code ကိုမှလေ့လာပါ
4 Mime: Code ကိုလေ့လာပါ
6 SoloLearn: Code ကိုလေ့လာပါ
Ya ကျနော်တို့ Grasshopper အကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ထက်နည်းနည်းနည်းနည်းပါးပါးပြောခဲ့တယ် ငါတို့သည်သူ၌အံ့ were ခြင်းရှိကြ၏ ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားသင်ယူခြင်းကို "gamify" လုပ်ရန်နည်းလမ်း။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ထိုဘာသာစကားများ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုလေ့လာစဉ်စိတ်ကျေနပ်မှုပိုမိုရရှိစေရန်ကစားခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်မည်။
Grasshopper: Code ရေးနည်းကိုလေ့လာပါ
ငါတို့တကယ်ပါပဲ ဂိမ်းမတိုင်မီသို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘာသာစကားအများစုနှင့်သက်ဆိုင်သောပရိုဂရမ်းမင်း၏အခြေခံမူများကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။ အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ် သငျသညျ C + ဘာသာစကားစတင်လေ့လာလျှင်ဤအရာသည်အရှုပ်ထွေးဆုံးဖြစ်ပြီးကျန်သောဘာသာစကားများအတွက်အခြေခံဖြစ်သည်ဆိုပါစို့။ အကယ်၍ သင်သည် C + ကိုသိလျှင်၎င်းသည်ကျန်တာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အနည်းငယ်သာကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် Automaton လုပ်နိုင်တယ် ယူရန်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်လိမ့်မည် သို့မဟုတ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအထောက်အပံ့အနေဖြင့်ဤပရိုဂရမ်၏အတွင်းနှင့်အပြင်များကိုသိရန်အထောက်အကူအနေဖြင့်ဖြစ်သည်။
ရေးသားသူ: ဂျယ်ရမီ Friesen
ကုဒ်: Code ကိုမှလေ့လာပါ
ယင်း၏အကြီးမားဆုံးသောအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည် အော့ဖ်လိုင်းပရိုဂရမ်ကိုသင်ယူပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် app ကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်ဒေတာလိုအပ်စရာမလိုပဲသင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်ပျော်စရာနည်းလမ်းဖြင့်သင်ယူနိုင်မည့်သင်ခန်းစာများကိုရရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်များတွင်သုံးနိုင်သည့်ကုဒ်နမူနာများရှိရမည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မှအကြံပြုသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရေးသားသူ: Upskew Pty ။ , Ltd.
Mime: Code ကိုလေ့လာပါ
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် program များကို scratch မှသင်ယူနိုင်လိမ့်မည်။ ဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုပင်ဖန်တီးပါ။ ပရိုဂရမ်များစွာကိုထောက်ခံသည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုနှင့်သင်၏မိုဘိုင်းမှပရိုဂရမ်များကိုသင်ယူရန်အကောင်းဆုံးသောအဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရေးသားသူ: Mimohello GmbH ။
ငါတို့မှာရှိတယ် Android အက်ပလီကေးရှင်း y ကျွန်တော်တို့ဟာပရိုဂရမ်မာတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုမတိုင်ခင်လက်တွေ့ပဲ။ အထူးသဖြင့် open source ကိုကြိုက်နှစ်သက်သူများနှင့်မည်သူမဆိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သူတို့၏ source code ကို upload လုပ်လိုသူများအတွက်။
စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းကိုအများအပြားသွားသည့်အလုပ်အဖွဲ့များအတွက်လည်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည် ကုဒ်လိုင်းများထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အရှင်တိုးတက်မှုအထောက်အကူပြု မည်သည့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအမျိုးအစားအတွက်မဆိုဖြစ်နိုင်သော bug များအားဖယ်ရှားခြင်း။ သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်တွင်အခမဲ့ရရှိနိုင်သည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု။
SoloLearn: Code ကိုလေ့လာပါ
Mimo လိုပဲ SoloLearn သည်ပရိုဂရမ်ဘာသာစကားတိုင်းကိုသင်ယူနိုင်သည် ကစပိန်၌တည်ရှိ၏အဖြစ်တည်ဆဲ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်မလိုအပ်ပါ အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူ (သင်ဤဘာသာစကားနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေသောများစွာသော command များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်နိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအကြံပြုပါသည်။ )
သင်ရှိသည် ကွဲပြားခြားနားသောသင်ယူမှုအဆင့်ဆင့် အဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်သောသူတို့အားသို့မဟုတ်အချို့သောအသိပညာနှင့်၎င်းတို့၏အသိပညာတိုးချဲ့လိုသူတစ်စုံတစ် ဦး သည်။ စပိန်ဘာသာစကားပြောခြင်း၊ အလွန်အလိုလိုသိပြီးအလွန်စနစ်တကျစီစဉ်ထားသော app တစ်ခု။
Sololearn: Code ရေးနည်းကိုလေ့လာပါ
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော interface ၏ဒီဇိုင်းနှင့်မည်မျှကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်ကြောင်းထင်ရှားစေသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၄.၇ မှတ်ရှိပြီးပြန်လည်သုံးသပ်ချက် ၁၇၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ တကယ်လို့အဲဒီလိုဆိုရင်ဒါကပရိုဂရမ်ကိုပိုမိုထိရောက်တဲ့နည်းနဲ့သင်ကြားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးမီဒီယာအချို့စုဆောင်းလာတဲ့အခါပါ။ ရှိပါတယ် developer များပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဖြစ်ခွင့်ပြုလေ့ကျင့်ခန်း သင့်ရဲ့သင်ယူမှုအချိန်အတွက်။
Enki: ဒေတာသိပ္ပံ၊ coding၊ နည်းပညာစွမ်းရည်တွေကိုလေ့လာပါ
ဒါကငါတို့အဆုံးသတ်ပုံကိုပါပဲ ပရိုဂရမ်ကိုလေ့လာရန်အတွက်သင်အသုံးပြုမည့်အက်ပလီကေးရှင်းများစာရင်း နှင့်ဤအားဖြင့် quarantine ၏နေ့ရက်ကာလမှကြီးစွာသောအမြတ်အစွန်းရဖို့သွားကြသည်နှင့်အတူ။ သင်အလုပ်အကိုင်အသစ်တစ်ခုရလိုလျှင်၊ အနည်းဆုံး ၂ လကြာအောင်ကြိုးစားပါကသင်ကိုယ်တိုင်အံ့အားသင့်သွားစေရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှု၊ ဇွဲနှင့်သည်းခံခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ ထိုအခါသင်သည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများလာလိမ့်မည်။ မလွဲစေနဲ့ ဒီအခမဲ့ Google သင်တန်းများ.
Telegram မှအကျိုးအပြည့်အဝရရှိရန်အသုံးပြုရန် Mega ဗီဒီယိုလမ်းညွှန်
Samsung Galaxy S20 - ကင်မရာစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း